Qalabka dib u soo kabashada xogta kombiyuutarka si loo helo xogta lumay - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Qalabka dib u soo kabashada xogta kombiyuutarka si loo helo xogta lumay
Aaladda dib u soo kabashada xogta diskka
U disk waa aalad inta badan loo isticmaalo kaydinta, laakiin marka aad isticmaaleyso diskka U, waxaa lagama maarmaan ah inaad la kulanto dhibaatada luminta xogta. Waqtigaan, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho aaladda soo kabashada xogta ee U disk si aad u soo ceshato xogta lumay sida tirtirka shilka iyo qaabka. Isku day aaladda dib u soo kabashada xogta U disk lacag la’aanta ah oo si dhib yar dib ugu soo celi xogta lumay! Ku saabsan aaladda soo kabashada xogta kombiyuutarka ee loo yaqaan 'disk disk disk data' iyo qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan 'disk disk disk data' iyo qalabka tijaabada ah. Qalabka soo kabashada si loo soo celiyo xogta lumay? Ku saabsan aaladda soo kabashada xogta kombiyuutarka ee kombiyuutarka 'U disk data cure tool' inta badan dadka isticmaala si ay u soo kabsadaan U disk lumay. Xogta noocan ah waxay ka caawisaa dadka isticmaala inay yareeyaan khasaaraha inta ugu badan ee suuragalka ah. U disk waa mid ka mid ah aaladaha keydinta xogta inta badan la isticmaalo, adeegsadayaashu waxay wadan karaan xogta leh diskka U ama waxay ku wareejinayaan xogta udhaxeysa aaladaha kaladuwan. Xogta ku kaydsan U disk-ka guud ahaanba waa ka sii muhiimsan tahay. Haddii xogta si shil ah u luntay, waxay u horseedi doontaa dhib badan iyo khasaaro isticmaalaha. Luminta xogaha U disk waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee xogta. Xogta ku keydsan diskka U ayaa laga yaabaa inay u baaba'aan sababo badan awgood sida tirtirka shilka, qaabka, iyo fayraska. Maxaan sameeyaa haddii xogta ku jirta diskiga U uu lumay? Waqtigaan, aaladda soo kabashada xogta U disk waxay ku imaaneysaa si wacan. Aaladda soo kabashada xogta U disk waxay ku sameyn kartaa iskaanka qoto dheer ee qalabka keydinta ee kujira diskka U, waxayna dib u soo saari kartaa macluumaadka aan la qorin, sidaasna lagu gaaro ujeeddada soo kabashada xogta. Marka waa kuwee midka u roon qalabka disk kabashada ee U disk? Qalabka dib u soo kabashada qalabka disk disk-ga, tijaabin
Loogu talagalay dadka isticmaala caadiga ah, aaladda ugu badan ee loo adeegsado soo kabashada xogta diskku waa kombiyuutarka xogta disk celinta. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira alaabooyin badan oo kumbuyuutar ah oo soo kabashada xogta kombuyuutarka ah suuqa, kumbuyuutarkee ayaa loo dooran karaa inuu soo kabsado xogta? Tifatiraha halkan wuxuu kugula talinayaa software soo kabashada. Waxaa loo adeegsan karaa aalado kaladuwan sida diskiyada adag, kumbuyuutarrada adag, diskiyada U, kaararka xusuusta iyo aaladaha kale sabab u ah tirtirka, qaabeynta, iyo burburka qeybta Ama xog kale ayaa lumisay sababa aan la garanayn. Softiweerka ayaa si aad ah loogu fududeeyay shaqada, oo adeegsadayaashu waxay ku dhammeysan karaan nidaamka soo kabashada xogta iyagoo adeegsanaya dhowr gujis oo fudud. Soosaar kabashada faylka iyo howlaha soo kabashada, oo loo isticmaali karo dib u soo kabashada feylasha la tirtiray, xogta la sameeyay, iyo soo kabashada qeybaha lumay. Software-kani wuxuu taageerayaa soo kabashada feylasha iyo qeyb ka soo kabashada aaladaha kala duwan ee kaydinta sida kombiyuutarka kombiyuutarka, diskiga U, kaarka xusuusta, diskka mobilada iyo wixii la mid ah. Bixi tijaabinta iyo howlaha horudhaca feylasha, adeegsadayaashu waxay u adeegsan karaan nooca tijaabada ah inay ku baaraan oo fiiriyaan faylasha bilaashka ah, si aad u garan karto heerka guusha ee soo kabashada xogta kahor intaadan diiwaan gelin barnaamijka softiweerka ah. Taageero FAT32, FAT16, FAT12, xog uruurin qayb exFAT ah. Sidee loo istcimaalaa aaladda xogta disk kabista si loo soo helo xogta lumay? Ku xir USBka drive USB ee u baahan inuu xogta ku soo celiyo kombiyuutarka, si kombiyuutarka uu u aqoonsado USB flash drive, ka dibna waxaad bilaabi kartaa soo kabashada. Waa in la xasuusiyaa in haddii diskiga U uu ku xiran yahay kombiyuutarka, nidaamka ayaa dhalisay inuu qaabeeyo diskka U, daaqadda isla markiiba si toos ah ayaa loo xiri karaa. Ha ku fulinin wax hawlgallo kale ah barnaamijka USB flash drive-ka illaa xogta USB Drive-ka laga soo celiyo. Waxyaabaha soo socdaa waa habka loo adeegsado barnaamijyada soo kabashada xogta kombiyuutarka ee loo yaqaan 'disk disk disk data' si loo soo ceshado xogta:
Tallaabada 1: Rakibo oo socodsiiso barnaamijka kabashada xogta. Ka dib soo-kabashada xogta soo-kabashada, laba-guji xirmada rakibaadda raacna saaxiriiyaha rakibaadda si aad u dhammayso hawlgalka rakibaadda. Xusuusin: Ha ku rakibin barnaamijka kombuyuutarka diskka meesha xogtu ka lumayo. Ka dib markii rakibida la dhammeeyo, waxaad arki doontaa interface soo socda, riix batoonka dhamaadka, softiweerku wuu socon doonaa. Tallaabada 2: Xulo habka soo kabashada xogta. Waxaad arki kartaa 4 habeyn oo soo kabasho ah qeybta ugu weyn ee dib u soo kabashada. "Soo celinta faylasha tirtiray"; haddii U diskka loo qaabeeyey si qalad ah, waxaad ubaahantahay inaad dooratid "Soo celinta faylasha qeybta" xulashada. Tilaabada 3: Xulo qeybta ay xogtu ka lumayso, guji batoonka xiga. Tallaabada afraad: sahaminta iyo soo celinta xogta. Laba jeer guji feylka natiijada baaritaanka kombiyuutarka si aad u fiiriso feylka, si aad si dhaqso leh uheli karto xogta aad rabto, waadna xukumi kartaa haddii feylku caadi yahay. Hubi feylasha ama faylka loo baahan yahay in dib loo soo celiyo, ka dibna riix batoonka soo celinta, si aad u nuqulili karto faylasha aad u baahan tahay si aad u dhammaystirto nidaamka soo celinta. Soo-koobitaan
Ugudambeyn talaabooyinkaan kor ku xusan, kadib waxaa loo qaabeeyay, tirtirey ama lumay sababa kale awgood. Dhamaan xogta U disk-ga si fudud ayaa looga soo kaban karaa! Qalabka dib u soo kabashada U disk-ga ayaa ka dhigaysa dib u soo kabashada xogta is-adeegga. Haddii aad la kulanto dhibaatooyin inta lagu guda jiro soo-kabashada xogta U disk-ka, waxaad had iyo jeer kala tashan kartaa adeegga macaamiisheena internetka.
PreDhibaatooyinka caadiga ah iyo hababka soo kabashada ee xogta xoqga U disk ee ay waxyeeleeyaan fayras
NextSida loo isticmaalo kombuyuutarrada xogta kombiyuutarka ee loogu talagalay soo celinta xogta diskiga